Mpamatsy fonosana otrikaina otrikaina mora vidy | YiZheng
Inona ny masinina fonosana mandeha ho azy?
Masinina fonosana ho an'ny zezika dia ampiasaina amin'ny famonosana pelora zezika, natao ho an'ny famonosana fitaovana be dia be. Anisan'izany ny karazana siny roa sosona sy ny karazana siny tokana. Ny masinina dia manana ny mampiavaka ny firafitra mitambatra, fametrahana tsotra, mora hitazomana, ary ny mari-pahaizana avo lenta izay ambany noho ny 0,2%.
Miaraka amin'ny "haingana, marina ary marin-toerana" - nanjary safidy voalohany amin'ny fonosana amin'ny indostrian'ny famokarana zezika.
1. Fonosana azo ampiharina: mety amin'ny kitapom-batsy, kitapo taratasy, kitapo lamba ary kitapo plastika, sns.
2. Fitaovana: vy vy 304 no ampiasaina amin'ny faritra ifandraisana amin'ilay fitaovana, izay mahazaka fanoherana avo lenta.
Firafitry ny milina fonosana mandeha ho azy
Amilina fonosana utomatika dia taranaka vaovao milina fonosana manan-tsaina novokarin'ny orinay. Izy io dia misy fitaovana fandanjana mandeha ho azy, fitaovana fampitaovana, fitaovana fanjairana ary fonosana, fanaraha-maso ny solosaina ary faritra efatra hafa. Ny maodely ilaina dia manana tombony amin'ny firafitra mirindra, endrika tsara tarehy, fandidiana miorina, fitsitsiana angovo ary fandanjana marina. Masinina fonosana mandeha ho azy dia fantatra ihany koa amin'ny ambaratonga fonosana habetsahan'ny solosaina, ny milina lehibe dia mandray sakafo haingana sy salantsalany ary miadana telo ary rafitra fampifangaroana sakafo manokana. Mampiasa teknolojia fiovam-po nomerika avo lenta, teknolojia fanodinana santionany ary teknolojia fanoherana ny fitsabatsabahana mba hahatsapana tambiny sy fanitsiana hadisoana mandeha ho azy.
Fampiharana ny milina fonosana mandeha ho azy
1. Karazan-tsakafo: masomboly, katsaka, varimbazaha, soja, vary, buckwheat, sesame sns.
2. Sokajy zezika: poti-tsakafo, zezika biolojika, zezika, amonium phosphate, poti urea be, nitrate amonium porous, zezika BB, zezika phosphate, zezika potash ary zezika hafa mifangaro.
3. Sokajy simika: ho an'ny PVC, PE, PP, ABS, polyethylene, polypropylene ary fitaovana granular hafa.
4. Sokajy sakafo: sokajy fotsy, siramamy, sira, lafarinina ary sakafo hafa.
Tombony amin'ny milina fonosana mandeha ho azy
(1) Hafainganana fonosana haingana.
(2) Ny refy habetsahana dia ambanin'ny 0.2%.
(3) rafitra mirindra, fikojakojana mora.
(4) Miaraka amin'ny milina fanjairana conveyor miaraka amina habe sy habeny avo lenta.
(5) Mampiasà sensor sens import ary ampidiro actuators pneumatika, izay miasa azo antoka ary mitazona mora foana.
Fampisehoana horonantsary milina fanangonana mandeha ho azy
Safidy maodely fonosana mandeha ho azy
MODELY YZBZJ-25F YZBZJ-50F
Lanja milanja (kg) 5-25 25-50
Fahamarinana (%) ± 0.2-0.5 ± 0.2-0.5
Hafainganana (kitapo / ora) 500-800 300-600
Hery (v / kw) 380 / 0.37 380 / 0.37
Lanja (kg) 200 200
Haben'ny ankapobeny (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
Teo aloha: Milina fampidinana & famahanana
Manaraka: Masinina fonosana avo roa heny Hopper